राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सकियो, बाबुरामदेखि प्रेम सुवालसम्म क-कसले गरेनन् मतदान ? — Imandarmedia.com
राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सकियो, बाबुरामदेखि प्रेम सुवालसम्म क-कसले गरेनन् मतदान ?
राष्ट्रपति चयनका लागि मतदान सकिएको छ । अपराहृन ४ बजेबाट मतगणना सुरु हुनेछ । निर्वाचनमा संघीय संसदका ३३१ र प्रदेशसभाका ५३६ सदस्य मतदाता गरेका छन् ।
मंगलबार भएको निर्वाचनमा ९७.९५ प्रतिशत मत खसेको छ । मंगलबार दिउँसो ३ बजे सकिएको मतगणनामा जम्मा ८६२ मत खसेको हो ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालका प्रदेशसभाका ५ सय ४९ मध्ये ५ सय ३६ जनाले मतदान गरेका छन् । यसैगरी, संघीय सांसदका ३ सय ३१ सांसदमध्ये ३ सय २६ जनाले मतदान गरेका छन् । दिउँसो ४ बजेबाट मगणना हुने आयोग प्रवक्ता ढकालले जनाकारी दिए ।
आयोगका अनुसार संघीय संसदका रेशम चौधरी, बाबुराम भट्टराई, प्रेम सुवाल, जितेन्द्रनारायण देव, रमेशप्रसाद यादव र प्रदेशसभाका कृष्णबहादुर चौधरी, धनमाया लामा, प्रल्लाद गिरी, प्रेमबहादुर तामाङ, विराजभक्त श्रेष्ठ, मनिशकुमार सुमन, रमेश पौडेल, राजेश्वर साह, दिन पन्त, शोभा शाक्य, सुरेन्द्र गोसाइ, हरिशरण आचार्य र हिमबहादुर शाही मतदानमा सहभागी भएनन् ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा निवर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वसांसद कुमारीलक्ष्मी राई प्रतिष्पर्धामा छन् । भण्डारीलाई वाम गठबन्ध, राप्रपा, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम लगायतको समर्थन छ भने राईलाई काँग्रेसको समर्थन छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेशसभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुने संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।
संघीय संसदका सदस्यको मतभार ७९ छ भने प्रदेशसभाका सदस्यको मतभार ४८ कायम गरिएको छ । संघीय संसद सदस्यका लागि ७९ मतभार रहेको सेतो पृष्ठभूमिमा हरियो तथा प्रदेसभा सदस्यका लागि सेतो पृष्ठभूमि रहेका रातो रङको ४८ मतभार रहेको मतपत्रको प्रयोग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका बाबुराम भट्टराई, प्रेम सुवाल तथा राष्ट्रियसभाका जितेन्द्र देव र रमेश यादवले मतदान गरेनन् । प्रदेशसभाका १४ सदस्यले पनि मतदान गरेनन् । राष्ट्रपतिका लागि वर्तमान राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र कांग्रेसकी पूर्वसांसद कुमारी लक्ष्मी राई चुनावी मैदानमा छन् ।